[MMAnime] Yuri!!! on Ice : Yuri!!! on Ice
Yuri!!! on Iceဟာ ၂၀၁၆မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြစကိတ်စီးခြင်းအားကစားနည်းကို အခြေခံထားတဲ့sport anime television series တစ်ခုပါ။ဂျပန်ကိုယ်ဟန်ပြစကိတ်သမား Yuri Katsuki၊ ရုရှားကိုယ်ဟန်ပြစကိတ်ချန်ပီယံVictor Nikiforov နဲ့ မျိုးဆက်သစ် ရုရုားကိုယ်ဟန်ပြစကိတ်သမား Yuri Plisetsky တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းအဓိကရိုက်ကူးထားပါတယ်။Yuri K နဲ့ Yuri P တို့က International Figure Skating Grand Prix မှာ ၀င်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ကြပြီးVictor က Yuri K ရဲ့ နည်းပြအဖြစ် ကူညီရာကနေ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်..ထူးချွန်ဆုများစွာ ရရှိထားတဲ့ serie ဖြစ်တဲ့အပြင်အခြားသော yaoi series တွေနဲ့ မတူဘဲအဓိကဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ အချစ်ကို မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ဖော်ကျူးထားတာပါ။